Yan Aung: ပါးပါးလေးပါ...
ကျွန်တော့်အိမ်မှာ Internet လုံးဝ Down သွားတယ်ဗျ. ဒီ ၂ ရက်လုံး မရတစ်ရက် ရတစ်ရက်နဲ့ ခုတော့ လုံးဝကို တာ့တာ့ပြသွားပါတယ်. ဒါကြောင့် ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းများနဲ့ အဆက်အသွယ် ခဏပြတ်သွားရတာကို တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ. Blogging လည်း မလုပ်ဖြစ်လိုက်ဘူး. ကျောင်းက Computer တွေကျတော့ Font ပေးမထည့်ဘူးလေ. ဒါနဲ့ မရရတာပဲလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ Template ကိုပဲ ထိုင်ပြင်နေခဲ့တယ်.
ခုတော့ Template မှာ Menu Bar ထည့်ပြီးသွားပြီ. ဟိုးထိပ်ဆုံးမှာ တွေ့ရလိမ့်မယ်. မာတိကာလည်း ထည့်လိုက်တယ်. တစ်ခြား အသုံးဝင်မယ့် Media လေးတွေကိုလည်း ထည့်လိုက်တယ်. ကိုမျိုးကျော်ထွန်း ပြောပြတဲ့ Cartoon Blog လေးကိုပါ ထည့်လိုက်တယ်. Template ရဲ့ ဘယ်ဘက်မှာ သီချင်းအသစ်လေးတွေ ထပ်တင်လိုက်တယ်. မြန်မာရုပ်ရှင်တွေ ကိုလည်း အမုန်းကြည့်ရပါလိမ့်မယ်ဗျား…
ပြီးတော့ အောက်ဆုံးမှာ ကျတော့ Sopcast Player ဆိုတာလေးကို ထည့်လိုက်တယ်. အဲဒီ့ Player လေးကို သုံးပြီး Premier League, Champion League ဘောလုံးပွဲတွေကို Live ကြည့်နိုင်ရုံမက အမျိုးမျိုးသော ရုပ်ရှင်တွေ၊ Comedy တွေ၊ News Channel တွေ၊ TV Series တွေကိုပါ ကြည့်နိုင်ပါတယ်. ActiveX Software ကိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စက်ထဲမှာ ရှိထားဖို့လိုပါတယ်. မရှိရင်လည်း အလွယ်တကူပဲ Download လုပ်ခိုင်းပါလိမ့်မယ်.
ခုတော့ အိမ်ကစက်မှာ အားတုန်းခဏလေး စာကိုရိုက်ပြီး Computer Lab ထဲကို သယ်သွား၊ ဟိုရောက်မှ Wireless Network တစ်ခုခုကို လှမ်းဖမ်းပြီး ဒီ Post လေးကို တင်ရပါမယ်. ဘယ်ရမလဲ. ရအောင်လုပ်မှာပေါ့. ပါးပါးလေးပါ.
Menu Bar ထည့်ပုံ၊ မာတိကာထည့်ပုံ၊ Sopcast Player ထည့်ပုံ၊ EOT လုပ်ပုံလေးတွေကို နောက်ထပ် Post လေးတွေ ရေးသွားပေးပါမယ်. EOT က မခက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် Instructions ပေးထားတာတွေ တစ်ချို့နေရာမှာ မပြည့်စုံတာလေးတွေ ရှိနေတော့ လုပ်ရတာ နည်းနည်းလေး ကသိကအောက်ဖြစ်နေရုံပါပဲ. ကျွန်တော်လည်း EOT အတွက် ကိုမောင်လှရဲ့ Post လေးအပြင် တစ်ခြားသော Website များကိုလည်း ရှာဖွေမွှေနှောက်ကြည့်လိုက် ရပါ တယ်. ခုတော့လည်း ပါးပါးလေးပါပဲဗျာ…
အဲ. စာအုပ်ထုတ်မယ့်သူတွေ ငြိမ်နေကြတယ်နော်. အဲဒါကတော့ သိပ်မပါးတော့ဘူး. လုပ်ကြပါဦး။ ၀ိုင်းကြပါဦး။ ၀န်းကြပါဦး ဘော်ဘော်တို့ရေ….
ပြီးတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖိုင်နယ်စာမေးပွဲကြီးကလည်း နောက် ၂ ပတ်နေရင် ရောက်လာပါ တော့မယ်ခင်ဗျာ. အဲဒါကလည်း မပါးတပါး ဖြစ်နေပါတယ်. တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော့်ကို ဘလော့ဂ်နဲ့ ဖိုရမ်မှာ မပါးတာတွေ့ရင် HW တွေ၊ Assignment တွေနဲ့ ပါးနေလို့ပါလို့ ကြိုတင်ပန်ကြားလိုက်ရပါတယ်. ချစ်ဆွေရောင်းရင်းတို့ရေ…
ဩော်. စကားမစပ်၊ နောက်တစ်ပါတ်ထဲမှာ သင်္ကြန်ကျတော့မယ်နော်. ပါးရမလား၊ ထူရမလား တကယ်ကို မပြောတတ်တော့ပါဘူး ပိတောက်ပန်းလေးရယ်…..
နေရစ်တော့နော်. ကိုယ်သွားတော့မယ်… ကျောင်းကို…